‘सात सालदेखि कांग्रेसको चारतारे झण्डा बोक्नेले के पायो, के पाएन ?’ - BP Bichar
Home/breaking/‘सात सालदेखि कांग्रेसको चारतारे झण्डा बोक्नेले के पायो, के पाएन ?’
‘सात सालदेखि कांग्रेसको चारतारे झण्डा बोक्नेले के पायो, के पाएन ?’
BP BicharDecember 18, 2018
काठमाडाैं । म एउटा कार्यक्रममा गएको बेला एकजना मानिस आएर भने- ‘बुझ्नुभयो केबी सर, मसँग सात सालको नेपाली कांग्रेसको चारतारे झण्डा छ । म त्यसलाई सधैं-सधैं पल्टाएर हेर्छु, अनि पट्याएर राख्छु नि !’ उनकाे कुरा सुनेर म बोल्न सकिन, मेरो आखाबाट आसु आयो ।
मनमनै साेचेँ, त्यो सात सालको झण्डा उसले किन राखेको छ ? उसले के पाउँछ ? अहिलेसम्म के पायो ? अब के पाउँछ ? के हेर्दै राख्छ ?
सामान्य-सामान्य कार्यकर्ताको झण्डाप्रति कति माया छ ।
अनि मन्थन गरेँ, त्यसले के ल्याएन ?
यो देशमा प्रजातन्त्र/लोकतन्त्र ल्यायो ।
हामीलाई दासत्वबाट मुक्त गरायो । रैतीबाट हामीलाई नागरिक बनायो ।
त्यसैले म विपीलाई सम्झिरहन्छु । उनले भनेका थिए कांग्रेस सकिदैन । ‘एउटा कांग्रेसले नै कयाैँ कांग्रेस जन्माउँछ ।’
तर अब हामीले आत्ममूल्याँकन गर्ने भएको छ । पार्टीको सिद्धान्त, दर्शन, मूल्य मान्यता र आदर्शहरुलाई कति पालना गरेका छौं । कति हामीले ब्याख्या गरेर भनेका छौं त । सुनेका छौं, सुनाएका छौं ।
कांग्रेसप्रतिको माया जनतामा छ कि छैन ?
एउटा बुझेको कार्यकर्ताले भन्छ- ‘मेराे बाजे कांग्रेस, बाउ कांग्रेस, र म पनि कांग्रस ।’
तर ऊ छाति फुलाएर भन्छ- ‘मैले यसपाली कांग्रेसलाई भोट दिइन् ।’
कांग्रेसमा यत्रो बितृष्णा किन आइराखेको छ ? हामीले के गर्न बाँकी छ ? हामी के गर्दैछौं ? हामीहरुले यसको समिक्षा गरेका छौं ?
यही पारा भयो भने सात सालदेखिको चारतारा झण्डा राख्ने मानिसको मन दुखाउँदैछाैं हामी । हामीले यही तरिका समय खेर फाल्ने हो भने नामोनिमेट भएर हामी सक्दैनाैं र ?
त्यसकारणले महासमितिमा आउने साथिहरुले के लिएर जाने भन्दा पनि के दिएर जानुहुन्छ ? अनि के लिएर बस्नुहुन्छ भोली दिनमा ? के दिनुहुन्छ आफ्ना भावी सन्तति तथा साथिहरुलाई कांग्रेस भएको गर्व गरेर ? मेराे प्रश्न छ ।
म त डाँडामाथिको जूनघाम भइसकेको मान्छे । मबाट के आशा गर्नुहुन्छ र ! मैले जे भनेपनि तपाईँहरुलाई विश्वास लाग्दैनहोला र म गर्न पनि त सक्दिन होला । मैले जतिसुकै काम गरेपनि विश्वास लाग्दैन होला ।
मैले विश्वास दिने ठाउँपनि त छैन ।
तर हामीले पार्टीप्रति इमानदारी देखाएनौं भने भविष्यका लागि हाम्रा सन्ततिका लागि साँच्चै राम्रो दिन, राम्रो समाज, राम्रो बाटो दिएर जान सक्छौं त ?
जुन कुरौ विपीले कहिल्यै आशा मारेर गएनन् र विपीको बाटोमा हिड्नको निमित्त एकपटक हामी सबैले प्रण गर्ने बेला आएको छ । ‘एउटा कांग्रेसले नै कयाैँ कांग्रेस जन्माउँछ ।’
(केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व महामन्त्री कुलबहादुर गुरुङले महासमिति उद्घाटन समारोहमा गरिएको सम्बोधन)
ओली सरकारको ठाडो आदेशमा सुकुम्बासीवस्तीमा डोजर चलाइयो, गरिब जनताहरुको हरिबिजोग (भिडियो)
भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री देवेगौडा राजनीतिक भेटवार्तामा ब्यस्त÷ पहिलो भेट प्रकाशमानसंग